के-पप स्टारको चमकधमकमा लुकेको अँध्यारो कथा
के–पप (कोरियाली) चर्चित गायिका सुल्लीले गत महिना आत्महत्या गरिन्।
सुल्लीको मृत्युमा उनकी साथी तथा ब्यान्डकी सदस्य गू हाराले लाइभ भिडियोमार्फत् विदाइ गर्दै भनेकी थिइन्- उनले आफ्ना इच्छाअनुसारका गीत स्वर्गमा पनि सुनाउँछिन् होला!
गायिका हाराले थप भनेकी थिइन्, 'अब म दोब्बर मिहिनेत गर्नेछु। मेरा फ्यानहरू मेरोबारे चिन्तित नहुनुस्। यो दुःखबाट म चाँडै निस्कन्छु।'
तर हाराले आफ्ना फ्यानसँग गरेको बाचा झुटो सावित भयो।
सुल्लीले आत्महत्या गरेको ६ सातापछि हाराको पनि त्यस्तै खबर बाहिरियो। राजधानी सिओलस्थित घरमा आइतबार उनको मृत शरीर फेला पर्‍यो।
सिओल नगरपालिका प्रहरी लि–योंग–प्योका अनुसार आइतबार हाराको घरमा काम गर्नेले शव देखेकी थिइन्। प्रहरीले हाराको घरमा नोट पनि भेटेका थिए जसमा उनले आफ्नो नैराश्यता अभिव्यक्त गरेकी छन्। सिओल अस्पतालमा राखिएको उनको शरीरलाई फ्यानहरूले घेरेका थिए।
के–पपका संसारभर प्रशंसक छन्। यिनका गीतमा छुट्टै किसिमको फ्युजन, भिडियो कला, फेसनका लुगा र नाच छ। संसारभर छोटो समयमै लोकप्रिय गायिकाको लगालग आत्महत्याले फ्यान तथा मनोविदहरूलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ।
आखिर किन निराश हुँदैछन् हिट सेलेब्रेटीहरू?
मनोरञ्जन उद्योगका विज्ञहरूले पहिल्यैदेखि चर्चाको अँध्यारो पक्षबारे चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार के-पप स्टारको चहकिलो रौनकका पछाडि अँध्यारो कथा लुकेको छ।
के-पप स्टार किशोर अवस्थामै सुन्दर अनुहार र नाचका कारण चर्चामा आउँछन्। करिब ३० वर्ष हाराहारी पुग्दासम्म उनीहरूको चमक घटिसकेको हुन्छ। नयाँ अनुहारले उनीहरूलाई प्रतिस्थापन गरिसक्छ र उनीहरू यो क्षेत्रमा पुराना हुन्छन्। ग्ल्यामर दुनियाँको सबभन्दा सामान्य नियम पनि हो।
तर यसले कोरियामा धेरै प्रभाव पारेको छ जहाँ कलिलो उमेरमै 'सुपरस्टार' बन्नेहरू धेरै छन्। अलि उमेर हुँदै जाँदा कोही एकल गायन, कलाकारिता वा टिभी कार्यक्रममा देखिने प्रयास गर्छन्। तर यो समय उनीहरूका लागि निकै कठिन हुन्छ जसमा थोरैले मात्र सफलता पाउँछन्। आफ्नो झिलीमिली संसार अँध्यारोतर्फ धकेलिँदै गर्दा उनीहरूमा नैरश्यता आउँछ।
अर्को कारण सामाजिक सञ्जाल र फ्यानहरूको प्रतिक्रिया हो। युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्विटर लगायत समाजिक सञ्जालमा फ्यानहरूले सजिलै प्रतिक्रिया दिनसक्छन्। यसमा सकारात्मकदेखि गालीगलौज र अनुहार–गायनलाई गिज्याइन्छ पनि। यसले के-पप स्टारलाई संसारका अरू देशकालाई भन्दा चाँडो असर पार्छ।
'उनीहरूले सानैदेखि मेकानिक जस्तो जीवन बाँचेका हुन्छन्,' एक दक्षिण कोरियाली पत्रकारले भने, 'उनीहरूले साधारण स्कुल वा सामाजिक जीवन बिताउनै पाउँदैनन्।'
'जसरी नाटकीय ढंगमा चर्चामा चुलिन्छन्, त्यसैगरी पतन हुनसक्छ। उनीहरूको पेसा नै मानसिक समस्याको कारक बन्छ। सामाजिक सञ्जालमा यति जेलिइसकेका हुन्छन्, जीवनबारे नकरात्मक खबर तारन्तार आउँछ। र त्यसलाई सबैले सामना गर्न सक्दैनन्।'
कोरियाली स्टारहरू समाजमा सामान्यतया देखिने वा सुनिने प्रतिक्रियाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालकै प्रतिक्रियामा चलिरहेका हुन्छन्। मान्छे व्यस्त छन्। समाज कस्तोसम्म हुन सक्छ भन्ने उनीहरूले देख्न-बुझ्न नपाउँदै सबैको आँखामा परिसक्छन्। कलिलैमा आफ्नो अनुहारदेखि लुगा, कला र व्यवहारसम्मले फ्यानहरूको चित्त बुझाउनुपर्ने दबाब सिर्जना हुन्छ। जुन दिन यी सबै व्यवस्थापन हुँदैन, फ्यानको आक्रोश बढ्छ। कलाकारमा नैरश्यता!
के-पप सेलेब्रेटी सुल्ली र हाराको आत्महत्या पहिलो होइन। सन् २०१७ मा सुल्ली के–पप गायक किम–जोंग–ह्योनको अन्तिम संस्कारमा पुगेकी थिइन्। २७ वर्षीय किमले पनि डिप्रेसनकै कारण आत्महत्या गरेका थिए।
२५ वर्षीय सुल्लीको आत्महत्याको कारण पनि डिप्रेसन नै हो। पछिल्लो समय उनी 'नो ब्रा' (ब्रा नलगाउने) अभियानमा सक्रिय थिइन्। तर यो सक्रियतासँगै सामाजिक सञ्जालमा आएका नकरात्मक टिप्पणीको सामना उनले गर्न सकिनन्।
उता २८ वर्षीय हारा पनि सामाजिक सञ्जालका नकारात्मक प्रतिक्रियाले आजित थिइन्। आफ्नो अनुहारको शल्यक्रिया गरेपछि उनीमाथि गालीगलौज आउन थालेको थियो। हेयर–डिजाइनर प्रेमीसँग सम्बन्ध विच्छेद भएपछि उनको स्थिति झनै खराब बनेको थियो। उनीहरूबीचको शारिरीक सम्बन्धको भिडियो सार्वजनिक भएको हल्ला पनि फैलियो।
हाराका पूर्व–प्रेमीले उनलाई शारीरिक सम्बन्धको भिडियो सार्वजनिक गर्ने बताउँदै बारम्बार सताइरहेका थिए। ती प्रेमीलाई साढे एक वर्षको जेल सजाय पनि सुनाइएको थियो। तर पछि अदालतले उनलाई जेल मुक्त गर्‍यो। कोरियाली प्रधानमन्त्री मुन–जेइ–इनको कार्यालयमा आएका अनलाइन निवेदनमा यौन दुर्व्यवहार गर्नेलाई सजाय माग गर्नेको संख्या नै २ लाख १७ हजारभन्दा बढी छ।
आफ्ना जीवनका पाटाबारे आएका नकारात्मक टिप्पणीहरू गायिका हाराले सकेसम्म सहने प्रयास गरेकी थिइन्।
'म यस्ता क्रुर कमेन्टलाई उदार रुपमा लिने छैन,' उनले इन्स्टाग्राममार्फत भनेकी थिइन्।
आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यबारे गुनासो गर्दै उनले कहिलेकाँही आफ्ना आलोचकलाई त्यसो नगर्न बिन्ती पनि गर्थिन्।
'यहाँ कोही पनि राम्रा मान्छे छैनन् जसले हामीजस्ता मानसिक पीडितलाई सहायता गरोस्,' उनले बिन्ती गर्दै भनेकी थिइन्, 'मजस्ता मनोरञ्जनकर्ताहरूको जीवन सहज छैन। हाम्रो निजी जीवन पनि हुँदैन जहाँ हाम्रो पीडा परिवार वा साथीभाइलाई सुनाउन सकौं। तपाईं कस्तो मान्छे हो भन्ने यस्ता आलोचना गर्नुअघि आफैंलाई सोध्नुस् त।'
हाराले अन्तिमपटक इन्स्टाग्राममा खाटमा पल्टिरहेको तस्बिर राख्दै लेखेकी थिइन्, 'राम्ररी निदाऊ।'
सुल्लीको मृत्युबेला आफू हार नखाने बताएकी हारा पनि नैरश्यतासँग हारिन्।